RASMI: Neymar oo hoggaaminaya saddex ciyaaryahan oo ka tirsan Kooxda PSG, kuwaasoo uu haleelay Karona Fayras – Gool FM
Haaruun September 2, 2020
(Paris) 02 Seb 2020. Neymar Jr ayaa noqday ciyaaryahankii saddexaad ee ka tirsan Kooxda koowaad ee PSG kaasoo laga helay Korona Fayras, kaddib Leandro Paredes & Angel di Maria, sida uu warinayso Wargeyska L’Equipe.
Kooxda xafidanaysa horyaalka Faransiiska kowaad bishii la soo dhaafay Final-ka Champions League la ciyaaray Bayern Munich ayaa isniintii shaacisay in labo xiddig oo aan magaceeda la shaacin laga helay calaamadaha Korona.
Wargeyska ka soo baxa Waddanka Faransiiska ee L’Equipe ayaa warinaya in labadaasi ciyaaryahan ay yihiin labada xiddig ee reer Argentine, Angel Di Maria iyo Leandro Paredes, kuwaasoo fasax wadajir ah ku qaatay Jasiiradda Ibiza.
Hadda labadaas ciyaaryahan waxaa ku soo biiray xiddiga reer Brazil ee Neymar Jr, kaasoo isna laga helay caabuqa Korona Fayras.
Kooxda PSG ayaa difaacashadeeda horyaalka Ligue 1 waxa ay bilaabi doontaa 10 bishan September, markaasoo ay wajihi doonaan naadiga Lens.